Qubanaha » ILMA-DHALIDA MIYAA LAGALA DAGAALAYAA!!!
ILMA-DHALIDA MIYAA LAGALA DAGAALAYAA!!!
Qofka unaxaya hooyada Uurka leh, ee in eey dhasho isbitaal ugeeynaya Waa muhiim in uu ogaado qalliinka Ilmaha dumarka lagusoo qalo, iyo boqolkiiba intee ayuu Isbitaalkaa hooyooyinka Ilmaha kusoo qalaa( Cesarean rate), maxaa badanaa marmarsiiyo looga dhigtaa, danaha laga leeyahay qalliinkaa, iyo khasaaraha nuuca qalliinkaasi uuleeyahay intaba.
Taariikhda ilmo-kuqalida dumarka ee mareeykanka waxeey 70-yadii ahaan jitey 1/8, ama Hadaan sikale udhahno, sideedii dumarka ee dhashaba, hal kamid ah baa lagu qalijiray, maantaase waxaa 1/3, ama sadexdii dumar ee Mareeykanka kudhashaba midnaa lagusoo qalaa, sababta eey u korodheyna aad baad uganaxeeysaa!
Waxaa kubarada caafimaadka Mareeykan ugaadeen ugu horeyn in badanaa dumarka Ilmaha lagusoo qalo, run ahaantii laqalo marka dhawaatiirtu dhaqada kasiibaxeeyso.Taa micnaheeda waxaa waaye, dhaqtarkii oo raba in uu qoyskiisa lacasheeyo, degdegna uga baxo shaqada, ayaa ku howl fududeysta, maadaama Qallinka uu qaato 1-daqiiqo iyo wax kayar, intii saacado hooyadii waqti lasiin lahaa, oo lasugi lahaa, maantoo dhan lala soconlahaa aqrista qalabka kuwada xiran, marka laga foolin lahaa, halis laga ilaalin lahaa Hooyadaa iyo cunugaba.
Waxeey sidoo kale khubarada caafimaadka Mareeykanka ogaadeen in lacag xoogan Isbitaallada kasameeyaan lacag xoogan ilmo-kuqalida hooyooyinka, oo Isbitaalka marka hooyada caadi udhasho lacagta uu kuhelayo waxaa aad uga badan marka uu kusoo qalo, marka waxaa meeshaa kujira ayey leeyihiin dano dhaqaale, waana waxa aad u kordhiyey Ilmo-kusoo qalida hooyooyinka.
Waxeey sidoo kale khubarada ogaadeen in mararka qaar laqalo dumarka iyadoo ardey dhaqaatiir buuxda noqoneeysa latusayo sida qalliinkaa loosameeyo.
Waxaa inta ugu badan looga faa’ideeystaa hooyadaa xanuunka hayo iyo dadka lasocdaba aqoonta caafimaad ee ladheeryahay iyo lasocod la’aanta waxajira.Waxaa badanaa lagu cabsigaliyaa in Ilmaha aanu horaba usoo socon, in qaab aan wanaagsaneyn, ama gadisgadis ah uu cunuga uyaallo, in Oxeygen-ka dhacdhacayo, in hadii hooyada hore looqalayna meeshii hore looqalay dib ufurfurmi rabto, taasoo halis weyn ku ah hooyada iyo cunugaba…….IWM.
Mareeykan Isbitaallada Mareeykanka qaarbaa 50% dumarka ilmaha lagusoo qalaa.Gobolkan Minneasota qaarbaa illaa 38% dumarka ilmaha lagusoo qalaa.Waloow eey rabaan in Khubarada caafimaadka gobolka eey sooyareeyaan oo eey ka dhigaan 19%.
Waxaa jira isbitaal meeshan ah oo ku yaalla Saint Paul-Minnesota, 24.4% (boqolkiiba afar iyo labaatan dhibic afar) Waa lagu qalaa ilmaha. Hey’adda Caalfimaadka Aduunka (WHO), waxeey leedahay Waa in eeysan kabadan 15%, ama bowolkiiba shan iyo toban, waxaa qalliinkaa faraha badan keenayana Waa lacagta Isbitaallada eey kasameeynayaa Insurance Companies-ka, iyo dhaqaatiirka wax qaleeysa, Nurses-ka iyo Wid-Wife-yada oo howshuna ufudaaneeyso, waqtigna ku save-gareeynaya, dabcan qofka eey qalliinka kula degdegayaana ma aha Hooyadood, walaashood, xaaskooda, iyo gabadhooda toona. Khubarada caafimaadka Mareeykanka waxeey leeyihiin qalliinka dumarka lagu sameeyo Mareeykanka 50% wax loobaahan yahay ma aha, oo waxaa loosameeyaa arimo aan loofiirin danta hooyadaa cunugaa lagusoo qalayo.
isbitaalkaa naag Hindi ah ayaa inta badan dumarka uqasho. Iyagoon qalliin ubaahneyn ayey dumarka-Gaar ahaan kuwo Minority-ga qaleeysaa, laba mar markeey kusoo qashana marka labaad waxeey isku toleeysaa xibno eey khalad tahay in la isku tolo, marka sadexaadna korkor ( vertical) ayeyba uqaleeysaa, si eeysan mardambe udhalin hooyadaa, ama hooyadaa halis ugasho hadiiba eey Uur isku qaado.Waxoo dhanna waxeey kasaxiixeeysaa Foom dheer, inta eeysan iskuba qalin, si eey dacwo iyo in laqabsado isaga badbaadiso.Dadkana Waa iska Masaakiin aan waxbadan lasocon, baarin oo aan aqrinin.Dumarkii Soomaalida ee dhasha badnaa ee Gobolkan Soomaalida kubadan tahay ubad badan sooyaacin lahaa, Wallee waa loo fikiray. Alloow sahal amuuraha.
Wallee Mareeykan waxbadan Waa lagu arkay.